ဇူလိုင်လ 2015 | 10 ၏စာမျက်နှာ 35 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 10)
LSB "ဟု The Wall"
Presteigne တန်းစီဇယားငှားရမ်းရန် Calrec အသံကထပ်ပြောသည်
Presteigne အသံလွှင့်အရစ်ကျယခုယင်း၏တန်းစီဇယားတစ်ခု Calrec အာတေမိ Shine အသံစားပွဲပေါ်မှာဆက်ပြောသည်သိရသည်။ အဆိုပါအာတေမိဒစ်ဂျစ်တယ် console ကိုကြောင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဘောင်အတွက်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြင်ပထုတ်လွှင့်ပလီကေးရှင်းအသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများသည်ယခုအကျွမ်းတဝင်နှင့်လူကြိုက်များအသံ console ကိုငှားဖို့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ Presteigne တစ်ဘောင်နှင့်အတူတစ် 40 fader အာတေမိ console ကိုရှေးခယျြထားလိုက်ပါတယ် ...
trilogy ပာဆက်သွယ်ရေး IBC 2015 မှာ VoiceFlow အထူးပြုလုပ်ပါရန်
IBC 2015 Trilogy ဆက်သွယ်ရေး, တီဗီစတူဒီယို, မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု, ပလေးအောက်နဲ့ post များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များနှင့် SPGs တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးမှာက၎င်း၏အသစ်အ VoiceFlow ™ဆက်သွယ်ရေးယူနစ် (VCU) feature မည် Gemini II ကို matrix ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်ကဖြန့်ဝေ။ လက်ရှိအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များနှင့်အတူမြင့်မားအဆင့်မြင့် IP ကိုစွမ်းရည်နဲ့တင်းကျပ်စွာပေါင်းစည်းမှုထုတ်ကုန်နှစ်ခုစလုံးအတွက်အဓိကပါရှိပါတယ်။ VCU အတွက်သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု ...
ငါးကြက်တံခွန် Technologies ကက Sky TV သို့ပို့ဆောင်ရေး Stream Splicer ထောက်ပံ့
ငါးကြက်တံခွန် Technologies က, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကြော်ငြာသွင်း၏လယ်ပြင်တွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများနှင့်စနစ်များရှေ့ဆောင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီက Sky, ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးလစာ-TV ကိုပံ့ပိုးပေးရန်၎င်း၏ TS Splicer ထုတ်ကုန်များရောင်းချမှုကြေညာခဲ့သည်။ က Sky သည်၎င်း၏ပရီမီယံဗြိတိန် OTT channel များကိုတစ်ဦးထက်ပို componentised ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုဆိုဒ်များကိုကျော်ပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်၏ 20 န်းကျင်ရွေ့လျားနေသည် ...
crystal Vision ၏ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား ORF ၏ဌာနချုပ်မှာစတူဒီယို RP3 ဖို့အဓိကအဆင့်မြှင့်များအတွက်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများကိုစာချုပ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အနီးကပ်ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှု, up / down / လက်ဝါးကပ်တိုင် converters အဖြစ်, synchronous နဲ့ Analog / ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီ Crystal Vision ၏ module တွေ 200 ရန်အဘို့အစာချုပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားလည်းဖြန့်ဖြူးချဲ့စက်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကတောင်းဆို; ဒီခဲ့ ...
ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ် Scheduler ကို, မူလ (NUC)
Entergy တည်နေရာ: post ကိုအလုပ်ဝေဖန်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အတူစိန့် Francisville LA ကအမေရိကန်ကူညီပံ့ပိုးမှု။ Entergy ကော်ပိုရေးရှင်းပို ... လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့်လက်လီအတွက်အဓိကအားဖြင့်စေ့စပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် >>
interface လုံခြုံရေးစနစ်များ LLC တည်နေရာ: ကမ္ဘာမြေစီးတီး MO ကိုအမေရိကန်ထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးမှုအထူးကုလိုအပ်ချက်များ :. အဆိုပါထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးမှုကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ & တာဝန်များ :. ထုတ်လုပ်မှု၏ဒါရိုက်တာ၏လမ်းညွှန်မှုအရ, ... နောက်ထပ် >>
မီဒီယာဆက်ဆံရေး International (2015-16 ရာသီ) - Binghamton အမတ်များ
အမေရိကန်ဟော်ကီအဖွဲ့ချုပ်တည်နေရာ: Binghamton နယူးယော့အမေရိကန် Oversee အဖွဲ့သည်ဓာတ်ပုံအစီအစဉ်နှင့်ဗွီဒီယို archive ကို။ အထောက်အထားများ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးတည်ထောင်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ ... ။ more >>
10 ၏စာမျက်နှာ 35«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 2030...နောက်ဆုံး»